Maalin: Janaayo 16, 2017
Mashaariicda Xariga ee Bursa ee Nolosha Nolosha: Magaalada Bursa Metropolitan Municipal, oo bixisa gaadiid u dhexeeya Bursa iyo Uludağ waddo casri ah, ayaa hadda loo isticmaali doonaa gaadiidka magaalada.Mijitaalka wadada ee u dhexeeya Bursaray Gökdere Station iyo Teferrüç [More ...]
Qadka Gawaarida Gökdere-Teferrüç Cable Car ayaa la Dhisi doonaa [More ...]
Isgoyska Batıkent, waxaa laga bilaabay isgoyska heerka iyo isku socodka isgoyska: Degmada Bat thekent ee degmada Bağlar ee Diyarbakır, Tareenka Gobolka ayaa bilaabay isgoysyada iyo shaqooyinka isgoyska. Meesha taraafikada lagu xayiro laba haad [More ...]
4 Shaqaalaha Tallaabooyinka Tareenka ee Yaan Haysan Mushaarka
Shaqaalaha Tareenka 4 Ma Aysan Haysan Inay Qaadhaan Waxqabadka Mushahar Bilaha ah: 40-kilomitir oo ah tareenka Palu-Genç-Muş ee dhismaha tareenka wuxuu ka shaqeeyaa Tuulada Genpe Çaytepe Village oo ku taal meel u jirta 114 kiiloomitir meel u jirta Bingöl. [More ...]
RayHaber 16.01.2017 Warbixinta Shirka
Awood la'aanta Ankara Metro
Ka gaabinta ee Ankara Baarlamaanka Metro: Ankara xigeenka Aylin Nazlıaka Madaxweynaha Grand National Assembly ee Turkey siiyey Wasiirka Arrimaha Gudaha Mudane Suleiman su'aalo baarlamaanka in laga jawaabo qoraal by kuwii gobta ahaa. Isha Nazlıaka waa Gaadiidka, Badda [More ...]
Tanrıkulu oo la socda CHP, jidadka tareenada ee ajandaha baarlamaanka
CHP Tanrıkulu wuxuu waxyeellada gaarsiiyay jidadka tareenka ugudambeeyay Ajanda baarlamaane: CHP Istanbul Sezgin Tanrıkulu wuxuu yiri, “Golaha Hanti-dhowrka Maxkamadda 2015 Sanadka Warbixinta Hanti-dhowrka ayaa daaha ka qaadaya xaaladda tareennada waxayna baarayaan tareennada. [More ...]
ADARAY iyo Basaska Dawlada Hoose ayaa u nugul Gaadiidka Caafimaadka leh: Dawlada Hoose ee Magaalada Sakarya waxay sii wadaysaa nadiifinta joogtada ah ee gawaarida dadweynaha. Metin Berberler, oo ah Madaxa Laanta Gaadiidka Dadweynaha, ayaa yiri: sağlıklı Muwaadiniintayadu waa ka caafimaad badan yihiin magaaladana aad ayey ugu xasilloon yihiin. [More ...]
2016 kun 884 TL ciqaab ah ayaa lagu soo rogay maraakiibta wasakheeyay Gacanka ee 520: Kocaeli Magaalo-Weyne, oo ay la socdaan doomaha kontaroolka ah ee loo yaqaan Kontrol Port Control-8 ”iyo“ Reis Bey kapsamında marka loo eego baaxadda la dagaallanka wasakheynta deegaanka iyo badda. [More ...]
Tababarka Tababarka Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada ee aasaasiga ah ayaa la siiyey shaqaalaha MOTAŞ
Seminarka tababarka Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada ee aasaasiga ah waxaa la siiyay shaqaalaha MOTAŞ: Shaqaalaha iyo darawalada ka shaqeeya qeybaha kala duwan ee MOTAŞ waxay kaqeybgaleen seminar uu siiyay khabiirka badbaadada shaqadu. Sharciga shaqada, nadiifinta goobta shaqada iyo [More ...]
Sida ay suurtogal u tahay in looga hortago shilalka heerka isgoysyada: Dhimashada ama waxyeelada ka dhaceysa isgoysyada heerarka ee TCDD ayaa nasiib darro ah inay wali socoto, in kasta oo taxaddarrada oo dhan la qaado. [More ...]
Gegada diyaaradaha ee Yunuseli hadda waa Bursa Metropolitan: Iyada oo ay ugu wacan tahay dadaalkeedii joogtada ahaa iyo halganka, degmada Bursa Metropolitan County waxay noqotay milkiilaha garoonka. Wasaaradda Gaashaandhigga, adeegsiga milateriga iyo maareynta duullimaadyada rayidka ah ee ka yimaada Maddaarka Yunuseli si dib-u-habeyn loogu sameeyo [More ...]
Ninkii ka gudbay tareenka gudahiisa ee Thailand ayaa yaabay qofkasta: dadkii arkay dhacdada ka dhacday xarunta tareenka ee Phetchaburi, Thailand, qof walba wuu la yaabay. Kaamirooyinka amniga ayaa duubay dhacdadan daqiiqad daqiiqad markii uu tareenka soo dhowaaday saldhigga. [More ...]
Tareenka reer Serbia wuxuu kor u qaadayaa xiisadda ka taagan Kosovo: Tareen ay ku yaalliin halyeeyooyinka u dhashay waddanka Serbia iyo sawirro ayaa ka ambabaxay Belgrade, oo ah caasimadda Serbia, una sii jeeda waqooyiga Kosovo. Si kastaba ha noqotee, dib-u-dejinta dagaallada dagaalka [More ...]